Amasiko aseArgentina | Iindaba Zokuhamba
UMariela Carril | | Argentina, isiko
Argentina ngokusisiseko a ilizwe labaphambukeli, Nangona ijografi ibanzi kangangokuba kuxhomekeka apho uya khona uya kuba nakho ukudibana namasiko angaveli kwimfuduko yaseYurophu kodwa evela kubantu bomthonyama nabamelwane baseLatin America.
Ngaloo ndlela, Amasiko aseArgentina ahlukahlukene kwaye ngokuqinisekileyo uya kuyifumana eyona uyithandayo ngokwe-gastronomy, intlalontle okanye indlela oziphatha ngayo. Uya eArgentina? Lixesha elihle ukuba ungowaseYurophu kuba ukwehla kweepeso kuye kwalunga kulo rhulumente wokugqibela kwaye utshintsho luya kukuthanda.
1 Amasiko aseArgentina egastronomic
2 Amasiko asekuhlaleni aseArgentina
Amasiko aseArgentina egastronomic
Ukutya kuqala. Kukho okunye ukutya okuqhelekileyo eArgentina kwaye okunokuthi kuthathelwe ingqalelo uphawu lwentengiso, nokuba sele kutyiwa kwamanye amazwe akummandla. Ndiyathetha asado, dulce de leche kunye nee-empanadas.
IArgentina ibisoloko ililizwe elithumela ngaphandle imveliso yezolimo, kwaye ukunqongophala kokushishina okunzulu kuyeyona ngxaki yayo iphambili kuphuhliso, kungoko iinkomo, ingqolowa kunye neembotyi zesoya ngoku zizezona zigcwele iipampas zazo ezityebileyo. Inyama imnandi, ikumgangatho olungileyo, ngokuchanekileyo ngenxa yamadlelo, kunjalo akukho mntu waseArgentina ongazilungiseleli i-asado ubuncinci kanye ngeveki. I-classic yempelaveki kunye nosapho okanye nabahlobo.
Apha, inyama yenkomo inezicucu ezahlukeneyo kunye namagama ahlukeneyo ngokuxhomekeke kwindawo yelizwe. Isinqe, umcu wokosa, iimpundu, irump, matambre. Isonka seChorizo, i-choripan, isonka esineesoseji zegazi, morcipán. I-achuras ayinakubakho kwi-grill yase-Argentina nokuba: iisoseji, igizzard, izintso, iisoseji zegazi, chinchulines (amathumbu). Inkosi elungileyo ye-barbecue iba yingcali ngokuhamba kwexesha, i-barbecue emva kwe-barbecue, umceli mngeni emva komceli mngeni, ke ukuba unethamsanqa ngokwaneleyo ukuba ungadibana nenye uya kutya eyona barbecue ilungileyo yobomi bakho.
Yintoni inyama engaka ehamba nayo? Ewe, ngeesaladi okanye iichips, isonka sosuku, isosi enencasa (i-chimichurri kunye ne-creole sauce), kunye nokuthatha i-hepatoprotector kwaye emva koko uye kulala kancinci kwaye ukwetyise. Isidlo senkalakahla!
Olunye uhlobo lwesiko lokutya yile isosi ye caramel, iswiti eyenziwe ngobisi kunye noshukela omdaka mnyama kwaye uswiti kakhulu. AmaArgentina ayayithanda kwaye akukho ilekese okanye ikhekhe elingenayo i-dulce de leche.
Las i invoyisiUmzekelo, iintlama zeswiti eziqhelekileyo ezenziwayo kwaye zithengiswa yiyunithi okanye idazini, zineentlobo ezininzi ezine-dulce de leche kwaye ziyafana nezithambisi zomkhenkce. Izinto ezilungileyo (ikhukhi zekaramel, iilekese, iitshokholethi).
Ndikholelwe, ukuba uyazama uyakuyithanda kwaye uyakufuna ukugoduka nezinye zezi zinto zithengiswayo kuzo zonke iivenkile kunye nevenkile ezinkulu. Okokugqibela, i Ezikum. I-Empanadas yenziwe kwiindawo ezininzi zaseLatin America, kwaye iintlobo ezivela kumantla eArgentina zithandwa kakhulu apha. Amantla lawo asondele kakhulu eBolivia nasePeru yiyo loo nto izitya zayo okanye nolwimi lwayo zinamacandelo amaninzi.
Kukho iintlobo ngeentlobo zeempada kwiphondo ngalinye kodwa ngokusisiseko bavela inyama okanye ihumita (ingqolowa, umbona), ebhakiweyo okanye eqhotsiweyo. Abathandi be-Empanadas bakhetha ukuzenzela ekhaya, ukwenza intlama kunye nokuzalisa ekhaya, kodwa kwizixeko ezikhulu ezo zithethe zilahlekile kwaye namhlanje ungazithenga nakweyiphi na ivenkile ethengisa ii-empanada kunye nee-pizza ngokufanayo.
Ngaphandle kweBuenos Aires ibonakaliswe ngokuthengisa iindidi ezininzi ze-empanadas ezingabonakaliyo ngaphakathi: ham kunye netshizi, imifuno, kunye nebhekoni kunye neplums, kunye newhisky, inkukhu kunye nokunye okubanzi.
Okokugqibela, malunga nokusela, awungekhe ungayihoyi iqabane. Yiyo ukumnika ezenziwe ngamagqabi esityalo esibizwa ngokuba yi-yerba mate (amagqabi asikiwe kwaye ayagalelwa), ahlanganiswe aze athengiswe. Emva koko, iArgentina nganye ineqabane ekhaya (isikhongozeli esincinci okanye esikhulu, esenziwe ngomthi, iglasi, isiramikhi okanye umthi owomileyo, umzekelo), kunye nebhalbhu yokukhanyisa ukungena.
I-yerba ibekwe ngaphakathi, kufakwa amanzi ashushu ngaphandle kokubilisa kwaye iyanxila, ingakumbi kwinkampani esempilweni kuba umoya weqabane loluntu, kwabelwana ngalo.
Amasiko asekuhlaleni aseArgentina
Abantu baseArgentina bavulekile kakhulu, banobuhlobo kwaye banobuntu. Ukuba bayakuthanda, abanangxaki yokuncokola, bakumemele endlwini yabo kwaye baphume nawe. I-Buenos Aires sisixeko esikhulu kakhulu esinesingqisho ngaphezulu kwekomkhulu lehlabathi, ke abantu bayemka ngoLwesithathu. Isixeko sinobomi obuninzi bobusuku, ii-bar ezininzi kunye neeresityu, kodwa ama-Argentina nawo ayayithanda i-cinema kunye neqonga kakhulu kwaye uhamba ezitalatweni nasebusuku.
Ezumelwaneni kuyinto eqhelekileyo ukubona amaqela abahlobo bethetha ekuzeni kokusa, behleli ekoneni okanye kwisikwere. Iidolophu zangaphakathi zelizwe zinobomi boluntu ngakumbi kuneBuenos Aires kuba uninzi lwazo, ngakumbi emantla, i-siesta ingcwele ke iiyure zokusebenza zinqunyulwa emva kwemini.
Ke, kuba izixeko zincinci kwaye akukho mntu uhlala kude kakhulu, ungaphuma yonke imihla kuba usuku olulandelayo kuhlala kukho ixesha lokuphumla kancinci.
Ngelixa kwezinye iindawo zehlabathi kunqabile ukuba abantu bawele ngokungalindelekanga kwikhaya lomhlobo apha kuqhele ukutyelela umhlobo ngaphandle kwesilumkiso. Bakhala intsimbi kunye ne-voila. Akukho mntu ukhubekileyo, akukho mntu kufuneka ajonge i-ajenda. Nokuba, Ukuhlanganisana ezindlwini kuyinto eqhelekileyoMhlawumbi utye emva koko uphume, mhlawumbi uyosa inyama. Abahlobo bahlala besolula usapho. Usapho, kwelinye icala, luhlala lusondele kakhulu kwiArgentina.
Ngokomzekelo, ngeCawa kuqhelekile ukuba intsapho ihlanganisane ukuze ifumane isidlo sasemini. Isiko liqhelekile kwidolophu yabaphambukeli kwaye nangona i-asado kukutya okuqhelekileyo, kunjalo nepasta. IArgentina yafumana umphambukeli obalulekileyo ovela e-Italiya ke kukho inzala eninzi yamaTaliyane bayayithanda ipasta. Ngelixa isizukulwana se ezingezizo Isiko lokuqokelelana kwisitya se ravioli okanye i-noodle enesosi phantse liphela liqhelekile. Esinye isithethe esihlonitshwayo kukutya imbuzane okanye intshongozo ngomhla wama-29 enyangeni.
Zithini ke izithethe zaseArgentina? Asado, empanadas, dulce de leche (ungalibali ukuzama i-ayisi khrim yale ncasa), iqabane (ngamayeza, iswiti okanye ubukrakra, nangona eyomdabu ihlala ikrakra), iyathetha nabahlobo, ukuphuma ukusela ibhiya okanye naphakade iintetho zekofu apho iArgentina inokusombulula umhlaba ngokungcakaza phakathi kweembono zopolitiko apho, ngokucacileyo, iPeronism ihlala isemoyeni, nokuba ngubani oyithandayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba Zokuhamba » America » Argentina » Amasiko aseArgentina
Yonwabela i-gastronomy yasePortugal